आमाले छोराको भुँडी बोकेपछी,भान्जा र छोरा मिलेर आमालाइ ! लास गोबर ग्यासको खाल्डोमा – Khabar Chautari
आमाले छोराको भुँडी बोकेपछी,भान्जा र छोरा मिलेर आमालाइ ! लास गोबर ग्यासको खाल्डोमा
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष १७, २०७७ समय: ११:४०:३८
के तपाईलाई थाहा छ, केराको बोक्रामा म्याग्नेसियम, पोटासियम र का’र्बोहाइड्रेटजस्ता न्यूट्रिएट्स हुन्छन् ? यति मात्रै होइन, यसले सुन्दरतालाई निखार्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । केराको बोक्रामा रहेको एन्जाइम्सले धेरै वस्तुको सफाईका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जान्नुहोस्, केराको बोक्राको ९ फरक प्रयोग बारे:
१. कुर्कुचा फुटेको : केराको बोक्रालाई फुटेको कुर्कुचामा घोट्नुहोस् र पाँच मिनेटपछि धुनुहोस् । यसो गर्नाले फुटेको कु’कुर्चालाई ठिक गर्छ । २. पहेलोपन हटाउन: केराको बोक्राले पहेलो भएको दाँतमा घोट्नु होस्, दाँ’तको पहेलोपना हटेर जान्छ । दिनहुँ जसो यसो गर्नाले दाँतमा चमक आउँछ । ३. जुत्ता चम्काउँन: केराको बोक्रालाई जुत्तामा रगड्नाले टलकिन्छ(चिम्किन्छ) ।
४. डन्डिफोर हटाउन: केराको बोक्रालाई ड’न्डिफोर निस्किएको ठाउँमा दल्ने गरेमा डन्डिफोर हट्छ । ५. विरुवा बढ्छ: केराको बोक्रालाई मलको रुपमा विरुवामा हालेमा चाँडै विरुवा बढ्छ । ६. स्क्र्याच हट्छ: सिडि वा डिभिडि स्क्र्याच भएमा केराको छालाले सफा गर्नुहोस् । ७. सजिलै सफा गर्न: चाँदीका गरगहना वा सामाग्रीलाई सफा गर्नका लागि केराको बोक्राले रगड्नुहोस्, सजिलै सफा र चम्किलो बनाउँछ । ८. छिटो पाक्छ मासु: मासुलाई पकाउँदा त्यसमा थोरै समयका लागि केराको बोक्रा पनि राख्नुहोस्, केहिबेरपछि निकाल्नुहोस्। मासुलाई चाँडै पकाउँन मद्दत गर्छ । ९. डार्क सर्कल हटाउन: आँ’खाको तल्लो छेउ भागमा केराको बोक्रालाई घोटेर दल्ने गरेमा ‘डार्क सर्कल’ हट्छ ।
शरीरमा पानीको कमी भएको कसरी थाहा पाउने? पानी सबैलाई चाहिने एक तत्व हो । कतिपयले पानीलाई साधारण सोचिरहेका हुन्छन्। हामीले पानी जतिबेला चाहियो, जसरी चाहियो, जति मात्रामा चाहियो पिउन सक्छौँ भन्ने धारणा बनाएका हुन्छौँ तर यो गलत हो। पानीले हाम्रो शरीरमा रहेका सबै अ’ङ्गलाई ठीक गर्नेदेखि लिएर शरीरमा बन्ने वि’षालु तत्वहरुलाई बाहिर निकाल्नका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पे’टदेखि छालासम्म होस् वा तौल बढाउनेदेखि तौल घ’टाउनेसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ पानीले। त्यसैले पानीको सही मात्रा, यसलाई पिउने सही समय र पानीलाई कुन तरिकाले पिउँदा कस्तो कस्ता फाइदा र बेफाइदा हुन्छन् भन्ने बारे जान्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ।
सही तरीकाले पानी नपिउने कुनै पनि मानिसले चाहे जतिसुकै स्व’स्थकर खाना खाए पनि त्यसको फाइदा श’रीरलाई हुँदैन। जसका कारण भविष्यमा मानिसले स्वा’स्थ्य सम्बन्धी अप’च, कब्जि’यत, ग्या’ष्ट्रिक, कले’जो सम्बन्धी सम’स्या, आलश्य, कि’ड्नीको प’त्थरी, प्रतिरो’धात्मक क्षमतामा कमी, समय–समयमा बि’रामी हुनु, दा’द, छालाको एल’र्जी, मुखमा दा’ग धब्बा, श’रीर बारबार चिला’उनु, टाउको दु’ख्नु जस्ता सम’स्या भोग्नु परिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा ७२ प्रतिशत पानी हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले पिउने पानीले हाम्रो शरीरमा रहेका कि’ड्नी, कले’जो, फो’क्सो, पाच’न प्रकृया र श’रीरका सबै अं’गको सही तरीकाले काम गर्ने अर्थात हाम्रो शरीरमा रशेका को’षीको जीवित राख्न मदत गर्दछ।
एक दिनमा कति पानी ? हरेक दिन नियमित पानी पिउनु स्वा’स्थ्यका लागि निकै फाइदा जनक मानिन्छ। पानीले शरीरका सबै अ’ङ्गलाई राम्रोसँग काम गर्न मदत गर्दछ। मानिस खाना बिना केही दिनसम्म बाँच्न सकेता पनि पानी बिना सक्दैन। किनकी मानिसले गर्ने गतिविधीद्वारा हरेक दिन २ लिटर पानी जाने गर्दछ। त्यसैले मानिसले एक दिनमा कति पानी पिउने भन्ने बारे जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। तर मानिसले कति पानी पिउने भन्ने बारे मानिस बसिरहेको ठाउँ वा प्रकृति हेरेर निर्धारण गर्नुपर्छ । सामान्य सबै मानिसले एक दिनमा कम्तिमा पनि तीन लिटर पानी पिउनु पर्दछ। तर गर्मी मौसम धेरै प’सिना निस्किने, व्यायामहरु धेरै गर्ने मानिसले भने पानीको मात्रा सामान्य मानिसहरुको भन्दा बढाउन जरुरी हुन्छ। किनकी यस्ता व्यक्तिको शरिरमा पानीको खपत धेरै हुने गर्दछ।
श’रीरमा पानीको कमी भएको कसरी पत्ता लगाउने ? यदि तपाइको श’रीरमा पानीको मात्रा कम भएको छ भने धेरै जसोको पिसा’बको रंग पहेलो हुने गर्दछ। त्यसका साथै पाच’न शक्ति कमजोर हुने गर्दछ भने छा’लामा सुख्खा’पना देखा पर्दछ। यस्तो कुरा थाहा पाएर पानी समयमै नपिउने हो भने पछि यो ग’म्भीर रो’गको कारण पनि बन्न सक्दछ।
एक पटकमा कति गिलास पानी पिउने ? धेरै मानिसहरुलाई यो लाग्न सक्छ, पानी जति बेला जसरी चाह्यो त्यति बेला पिउन सकिन्छ। तर त्यस्तो सोच्नु गलत हो। पानी पिउदा जहिले पनि बसेर बिस्तारै बिस्तारै पिउनु पर्दछ। पानीलाई मुखमा राखेर ३ देखि ४ सेकेण्ड यता उता घुमाएर पिउनु पर्दछ। उभिएर छिटो छिटो पानी पिउनाले कि’ड्नीले पानी सही तरीकाले फिल्टर गर्न सक्दैन। एक पटकमा दुई गिलाससम्म पानी पिउनु उपयुक्त मानिन्छ।
पानी कति बेला नपिउने ? खाना खाने समयमा कहिल्यै पनि पानी पिउनु हुदैन। यसरी पानी पिउँदा हामीले खाएको खानालाई चाहिने भन्दा धेरै पातलो बनाईदिन्छ। जसका कारण पाच’न रस कम मात्रामा निस्किने गर्दछ। त्यसैले पानी सधैँ खाना खाएको ४५ मिनेट देखि १ घण्टा पछाडि मात्र पिउनु पर्दछ। बिहानको खाली पे’टमा १ गिलास पानी पिउनुपर्दछ । पिउने पानी कस्तो हुनु पर्छ ? धेरै चिसो पानी कहिल्यै पिउनु हुँदैन। जसले पाच’न प्रकृयामा समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि सामान्य वा मनतातो पानी पिउनु पर्दछ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारि’रिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वा’स्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वा’स्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।